Torohevitra hanatsarana ny fahaizanao amin'ny maha mpamorona anao | Famoronana an-tserasera
Amin'ny maha mpamolavola anao dia mety efa nandalo io fotoana io ianao izay misy anao tanteraka mifantoka amin'ny famoronana tetikasa ary miafara amin'ny "mandingana" sakafo ianao na angamba nosoloinao sandwich na kafe, satria haingana kokoa io ary tsy mandany fotoana miasa ianao. Na izany na tsy izany, arakaraka ny fandehan'ny fotoana, ny fitsipahana sakafo na fanoloana zavatra tsy salama dia misy vokany eo manimba ny zava-bitanao fa tsy manampy anao.
Rehefa mieritreritra izany izahay dia hanome torohevitra vitsivitsy izay tsy hanampy anao hanatsara ny fahaizanao rehefa manatanteraka ny anao Mpamorona endrika aho miasa, fa koa ho an'ny isan'andro isan'andro.
Ireto ny torohevitra ilainao hanatsarana ny fahombiazanao
1 Mihinana fifantohana bebe kokoa
2 Doka kafeinina natolotra
3 Vitamina ho an'ny fahasalaman'ny maso
4 Sakafo hanatsarana ny fahasalamana miaraka
Mihinana fifantohana bebe kokoa
Ny fitsipahana sakafo dia mety hisy vokany, toa ny fiatraikany amin'ny anao fampisehoana ati-doha noho ny tsy fahampian'ny glucose, izay miteraka havizanana ara-tsaina lehibe.
Noho io antony io ary raha ny filazan'ny mpahay sakafo iray, tsara kokoa ny mihinana sakafo dimy isan'andro, isaky ny adiny telo ary tsy mandingana ny iray amin'izy ireo. Manana ny fahafahana misafidy eo amin'ny voankazo, legioma ary voamaina iray manontolo, satria ireo no loharanom-gliokaozy tsara indrindra.
Doka kafeinina natolotra
Ny kapoaka misy kafe 180ml dia mety manana kafe kafe 20-150mg, arakaraka ny fomba nanamboarana azy. Toy izany koa zava-pisotro mamelombelona atolotra Amin'ny marika samihafa, ho an'ny 360 ml matetika dia misy kafeina 23-71mg.
La nanoro hevitra ny doka kafeinina ho an'ny olon-dehibe salama dia eo anelanelan'ny 400-450mg isan'andro. Ka ny tena azo atoro dia ny eo anelanelan'ny kafe 3-4 kaopy.
Vitamina ho an'ny fahasalaman'ny maso
Saika izay rehetra mandrafitra ny asan'ny mpamorona dia mitaky ny fahitan'izy ireo.
Na izany aza, rehefa mihantitra isika, dia lasa vatana sarotra kokoa ny mamerina sela, izay mety hanimba ny fahasalaman'ny maso, ankoatry ny fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fahitana.
Na izany aza, amin'ny fihinanana sakafo mahasalama dia azo atao ny manemotra izany fahaverezan'ny kalitao ary mampihena ny antony mampidi-doza mitarika amin'ny fivoaran'ny sindrom-maso maina, ny katarakta ary ny fihenan'ny macular mifandray amin'ny taona antsoina koa hoe AMD.
Ny vahaolana dia ny fanjifana mineraly, vitamina antioxidant, omega-3 ary zinc, noho izany, ny vitaminina tsara dia tena manampy be.
Sakafo hanatsarana ny fahasalamana miaraka
Marina hamafiso ny vatana hanitsiana ny fihetsika, satria ny kapila herniated sy ny osteoarthritis dia miteraka fanaintainana lehibe izay tsy mandeha miaraka amin'ny "menaka manitra". Amin'io lafiny io dia nivadika ho vondrona tandindonin-doza ireo mpamorona, satria manao hetsika tsy mety foana izy ireo.
Noho io antony io dia tsara ny mampindrana anao ny fikarakarana vatana mety, mikarakara sy manampy azy amin'ny fihinanana sakafo sasany izay tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny hozatra sy ny tonon-taolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra hanatsarana ny zava-bitanao amin'ny maha-mpamorona anao